Google maara ebe ị nọ, n'agbanyeghị ma ọnọdụ gị arụ ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Google maara ebe ị nọ, n'agbanyeghị ma ị nwere ọnọdụ enyere
android Ọ bụghị naanị na ọ bụ sistemụ arụmọrụ kachasị eji n'ụwa niile, ọ bụkwa na mba ndị dị ka Spain ọnụnọ ya na-anọchite anya ihe niile, na ọ bụ na ihe dị ka pasent 85 nke ndị ọrụ ekwentị mkpanaaka na mba ahụ jikọtara gam akporo. Nke a bụ otu Google si mee ka sistemụ arụmọrụ ya bụrụ okpukpe.
Ma, ike dị otú ahụ nwere ezigbo ihe ma mgbe ụfọdụ ọ na-enwekwa ihe ọjọọ. Ihe omuma atu doro anya bu na Google gosipụtara nso nso a na ọ chọghị ịma ma ọ bụrụ na ịnwee ọnọdụ arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ maara ebe ị nọ n'oge niile ... kedu ka ha si eme ya?
Google kwadoro na onye ọrụ nọ mgbe niile, nke ahụ pụtara na n'etiti ihe ndị ọzọ, ụlọ ọrụ Adịghị njọ Ọ na-eme ka data a nwee ike ịnakọta ya wee ree ya iji mepụta usoro ahịa. Agbanyeghị ... ị chere na ị "nwere nchekwa" ma ọ bụrụ na ị nwere nkwarụ mpaghara? Ọ dịghị ihe dị anya site na eziokwu. Google jiri usoro triangulation na-eji antenna iji mara ebe anyị nọ oge niile. Hasmụ nwoke nke a achọpụtala nke a Quartz na nzaghachi dị ịtụnanya nke Google nyere ụdị nchọpụta a agaghị ahapụ gị enweghị mmasị.
Dabere na Google, ọ dị mkpa ịmata ebe anyị nọ oge niile iji meziwanye ọsọ nke ebutere anyị ozi na ịkwanye ọkwa. Nke a bụ ihe kpatara Google ji mee ka anyị dị ka ezigbo Nnukwu Nwanna na ọkwa ụwa. N'ezie, ha enyebeghị nkọwa ọ bụla banyere otu nke a si emetụta n'ezie ọrụ nke ọrụ a. Ka ọ dị ugbu a, ihe ị kwesịrị ịma bụ na ị gaghị enwe ike iwepu usoro ọnọdụ triangulation a, yabụ, Ọ bụrụ na ị na-agbanyụ ọnọdụ ahụ, nke ahụ bụ maka nchekwa batrị ọ na-eche, n'ihi na Google na-achọta gị n'otu ụzọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Google maara ebe ị nọ, n'agbanyeghị ma ị nwere ọnọdụ enyere
Hawaii na Belgium na agha megide igbe nkwụghachi ụgwọ na egwuregwu vidio